प्रधानमन्त्री देउवालाई दशैंको टीका थापेर दाम राख्दै खुट्टा ढोग्ने व्यक्ति को हुन् ? बन्यो भिडियो भा,इरल – Kavrepati
Home / मनोरंजन / प्रधानमन्त्री देउवालाई दशैंको टीका थापेर दाम राख्दै खुट्टा ढोग्ने व्यक्ति को हुन् ? बन्यो भिडियो भा,इरल
admin October 20, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 127 Views
काठमाण्डौ/ कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दशैंको क्रममा कार्यकर्ताहरुलाई पनि टीका लगाएका छन् । यहीबीच, दशैंको टीका थाप्न आएका एक कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री देउवाबाट टीका ग्रहणपछि दाम राखेर खुट्टा ढोगेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियोले निकै चर्चा मात्र पाएको छैन, प्रधानमन्त्रीको कडा आलोचना समेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो शेयर गर्दै एक जनाले प्रश्न गरेका छन्ः ‘यसरी खुट्टामा दाम राखेर ढोगेको दृश्यले राजा र रैती भन्ने पुरानै संस्कार/प्रवृत्ति दोहोरिएन ? राजाकै शैलीमा उच्च ओहदाका ब्यक्तिले दशैमा टीका लगाइदिने क्रम अझै रोकिएन ?’
भिडियोमा देखिने ति व्यक्तिको पुरा परिचय नखुलेपनि देउवाकै कार्यकर्ता रहेको बुझिएको छ ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दशैंको क्रममा कार्यकर्ताहरुलाई पनि टीका लगाएका छन् । यहीबीच, दशैंको टीका थाप्न आएका एक कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री देउवाबाट टीका ग्रहणपछि दाम राखेर खुट्टा ढोगेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
भिडियोमा देखिने ति व्यक्तिको पुरा परिचय नखुलेपनि देउवाकै कार्यकर्ता रहेको बुझिएको छ । भिडियो
Previous वर्ल्ड कप कतारको मृत्यु नेपालीको : कतार स्टेडियम निर्माण गर्दा यति धेरै नेपालीको मृत्यु
Next भारी बर्षाका कारण जताततै पानी भएपछि देक्चीमा बसेर गरे यी जोडीले बिवाह..